Nyefee Photos site na iPhone ka iPhoto
Nwere ọtụtụ foto gị iPhone na chọrọ nyefee photos site na iPhone ka iPhoto maka management ma ọ bụ free elu iPhone ohere? N'ezie importing photos ma na Igwefoto Roll na Photo Library si iPhone ka iPhoto dị mfe. Ebe a na-esonụ, Aga m ịme ihe dị mfe ma na ngwa ngwa ụzọ nyefee photos site na iPhone ka iPhoto. Na-agụ na ịmụta otú nweta ihe mgbaru ọsọ gị mfe.
Wondershare TunesGo (Mac) bụ iPhone ngwá ọrụ na m nwere ike ikwu ka mmekọrịta photos site na iPhone ka iPhoto. Ọ bụ ezie na iPhoto-ahapụ gị nyefee foto site na iPhone Igwefoto Roll, ọ bụghị otú kemfe na ọ na-apụghị nyefee photos site na iPhone Photo Library na kọmputa mgbe Wondershare TunesGo (Mac) nwere ike ime ya n'ihi na ị na ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Mac OS X Snow agụ owuru, odum, Mountain Odum, Mavericks, Yosemite na El Capitan.
Nzọụkwụ 1. Jiri eriri USB jikọọ gị iPhone na gị Mac
Ikwunye na eriri USB eriri USB na gị Mac na jikọọ na ya na gị iPhone dị ka mma. Ẹkedori Wondershare TunesGo (Mac) na ị pụrụ ịhụ na ọ na-achọpụta rụọ gị iPhone na gosipụta isi Ama na-amalite window. Nke a iPhone software n'ụzọ zuru ezu na-akwado ndị ọhụrụ iPhone 5s na ndị ọzọ tọrọ ụdị na-agba ọsọ iOS 9.
Nzọụkwụ 2. Importing foto site na iPhone ka iPhoto
Site akasiakde window, ị pụrụ ịhụ ihe "Photos". Pịa ya ikpughe Photos window. Site popped elu window, ị pụrụ ịhụ na iPhone photos na-echekwa na 2 ebe: Igwefoto Roll na Photo Library. Na n'aka ekpe, pịa Igwefoto Roll ma ọ bụ Photo Library ikpughe foto niile n'ebe a. Họrọ photos na pịa "Export" bụ nke na n'elu nke window. Na pụtara mkparịta ụka igbe, chọta a ebe na-azọpụta ndị a exported iPhone photos.
Site n'akụkụ aka nri nke Wondershare TunesGo (Mac) window, ị nwekwara ike họrọ foto albums ma nyefee ha si iPhone ka iPhoto. Mma foto album, nri pịa ya ma họrọ "Export".
Mgbe exporting iPhone photos, i nwere ike iji iPhoto na gị Mac mbubata ọ bụla nke a foto na gị Mac. Na iPhoto na foto ndị a, ị nwere ike ịmepụta foto albums, hazie kalenda, mee ka ihe ngosi mmịfe na kaadị, wdg Nke a bụ otú nyefee iPhone foto iPhoto. Na site na wụnye Wondershare TunesGo (Mac), n'ọdịnihu, ma ọ dị mkpa, ị nwere ike mbubata iPhoto foto iPhone dị ka mma.
Ebe a bụ Video Tutorial Iji nyere gị aka Nyefee iPhone Photos ka iPhoto:
Best Mac ka iPhone Nyefee gaa na Nyefee File ka iPhone
> Resource> iPhone> Nyefee Photos site na iPhone ka iPhoto